Dowladda Soomaaliya oo caalamka ka codsatay wada shaqeyn si loo joojiyo ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo caalamka ka codsatay wada shaqeyn si loo joojiyo ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ka codsatay adduun weynaha, Afrika iyo Wadamada Khaliijka in laga wada shaqeeyo joojinta dhoofinta sharci darada ah ee dhuxusha Soomaaliya.
Isaga oo ka hadlayay shir looga hadlayo ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha oo ka dhacay Muqdisho, ayna waday Qaramada Midoobay, Raysulwasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay joojin doonto ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha.
“Waxaanu u baahanahay jawaab buuxda si aan wax uga qabano arrinta dhuxusha ee Soomaaliya. labadaba dalab iyo siin waa in la joojiyaa, si loo sameeyo sidaan waxaanu u baahanahay wada shaqeyn si loo fuliyo qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay lana xaqiijiyo deegaanka, waxyeelada dhaqaale iyo dad taasoo dhacaysa sababtoo ah ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha ayaa la xakameynayaa,” ayuu yiri Raysulwasaare Ku xigeenku.
Shirkan ayaa waxaa taageeray Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay (UNDP), Haayada UN-ka u qaabilsan deegaanka, iyo Haayada Cunada iyo Beeraha u qaabilsan Qaramada Midoobay (FAO).
December 21, 2018 Mooshinkii ka dhanka ahaa madaxweyne Farmaajo oo la tuuray